AO RAHA Gazety Malagasy Online – Tapatapany	Ny gazety Ao RahaTahiry
Lahatsoratra nampiasa ny teny miverina matetika: Tapatapany	Miverena Tapatapany(0)Varotra zava-mahadomelina. Vehivavy iray saron’ny polisy nitondra rongony 50 fonosana teny Antohomadinika, ny alahady tokony ho tamin’ny 12 ora antoandro no naiditra am-ponja vonjimaika rehefa avy natolotra ny Fampanoavana. Raha ny tatitra azo avy amin’ny polisim-pirenena dia novidiany teny amin’io toerana nahatratrarana azy io ihany ireo rongony ary Ar 3000 no nividianany azy ka nokasainy hamidy Ar300 ny iray amin’ireo fonosana.
Voatifitra. Jiolahy iray no naratra voatifitry ny zandary tany Soanafindra Tsiroanomandidy, omaly vao maraim-be tokony ho tamin’ny 2 ora maraina. Teo am-panafihana tokantrano iray ireo olon-dratsy no tonga ny zandary ka raikitra ny fifandonana. Mbola nentin’ireo namany nitsoaka ihany ilay olon-dratsy voatifitra.
Tody any amin’ny toerana hiompiana azy, any Ifaty Toliara ny alatsinainy teo ireo sokatra 250, nisy namoaka an-tsokosoko ka tratra tany Tailandy. Ny fikambanana mpiaro ny sokatra PSA sy ny Salamandre Nature ary ny kaompania Air Mada- gascar no nifarimbona namerina azy tany amin’ ny toerany nisy azy ireo. Sokatra 2 570, toa azy ireo, ahiana ho lany tamingana no efa ompiana ao amin’io faritra nana- terana azy ao Ifaty io.
Niaina tao anatin’ny aizina ny kartie roa ao Fenoarivo Atsinanana vokatry ny fianjeran’ny hazo, nisy nanapaka tamin’ny taribin’ny Jirama. « Nahatratra 50 metatra ny tariby tsy azo noraisina intsony ka nahatonga ny fahatapahan’ny herinaratra. Tokony manao filazana amin’ny Jirama izay manapaka hazo,mba hisorohana ny loza toy ireny », hoy Razafindrabe Jean Robert, lehiben’ny Jirama ao Fenoarivo Atsinanana.
Tapatapany(0)Mpanao hira gasy voatafika > Fiara nitondra tarika mpanao hira gasy no notifirin’ny jiolahy tany Marovoalavo Soa-vinandriana Itasy, ny alahady hariva teo, tokony ho tamin’ny 5 ora sy sasany. Rehefa lany bala ireo jiolahy dia nitsoaka fa ilay fiara kosa no nivadika. Tsy nisy naratra na maty ireo olona tao anatin’io fiara io.
Fikasihan-tanana > Malagasy iray 33 taona voatondro ho nandratra tovovavy malagasy iray, 22 taona, no notazonin’ ny polisy any Maorisy ny alatsinainy teo. Mbola tsaboina any amin’ny hôpitaly any Maorisy kosa amin’izao fotoana izao ilay tovovavy. Tao-rian’ny famotorana nataon’ ny polisy dia fantatra fa resa-pitiavana no nahatonga io fikasihan-tanana io.
Ankizilahy naratra mafy > Ankizilahy iray mpilalao irony kiraro misy kodiarana irony no naratra mafy teo amin’ny tarehiny raha iny izy nana- raka taksibe avy ao aoriana omaly hariva, teny Antsahabe. Namikitra taorian’ilay taksibe izy tamin’io fotoana io kinanjo sendra lavaka ny tongony ka izay no nampi-trosona azy tamin’ny arabe, araka ny voalazany.
Sombiny(0)HIFANATRIKA > Ny alakamisy izao no hiha-ona amin’ireo mpikambana eo anivon’ny gover- nemanta ireo mpikambana ao amin’ny Filan-kevitra ambonin’ny tetezamita. Isan’ny horesahina manokana mandritra izany ny raharaham-pifidianana. Raham- pitso dia hisy ihany koa ny fihaonan’ireo mpi-kambana Cst amin’ny minisitry ny Fambolena, Roland Ravatomanga, izay hanasiana tsindrim-peo manokana mikasika ny ady amin’ireo andiam-balala any Atsimo.
TONGAVA SAINA > Nanao antso ho an’ny fahatongavan-tsainan’ ny mpanao politika Mala-gasy ny masoivohon’ny Sina, Shen Yongxiang, niasa teto Madagasikara, omaly teny amin’ny mini- siteran’ny Raharaham-bahiny nandritra ny lanonana fanolorana mariboninahitra azy. Ankatoky ny famahana ny krizy i Madagasikara izao, ka izany no ampi-risihana ny Malagasy hiroso amin’ny fifidianana, araka ny voa-lazany.
Mbola hisy fivoriana faharoa hiarahan’ireo tompon’andraikitra rehetra eny anivon’ny seranam-piara­manidin’Ivato (zandary, polisy, fadintseranana…) sy ny Acm (Aviation civile de Madagascar) hatao, raha ny fantatra. Natao fomba handrindrana fiaraha-miasan’iretsy voalohany amin’ilay orinasa nokaramain’ny Acm hisehatra amin’ny fomba hahazoana antoka ireo seranam-piaramanidina valo manerana ny Nosy. Tsiahivina fa hitondra ny traikefany manoloana ny fiantohana ny seranana, hisorohana ny varomai­zina sy ny fampidirana na fanondranana tsy ara-dalàna eo anivon’ireo sera­nana io orinasa io.
Nandray anjara tamin’ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny zava-manan’aina, niaraka tamin’ny minisite­ran’ny Tontolo iainana sy ny Ala, ny tetikasa Ambatovy ny 22 mey lasa teo. Ny maha zava-dehibe ny rano sy ireo zava-manan’aina no lohahevitra nandritra io fankalazana io. Isan’ireo laharam-pahamehan’ Ambatovy, mpitrandraka nikela sy kôbalta ao atsimo ny fandaharana asa entina hiarovana ny tontolo iainana.
Tapatapany Vazaha maty irery > Lehilahy teratany vahiny iray no maty irery tao an-tranony tetsy Mandrosoa Ivato ny sabotsy teo. Mbola tsy fantatra hatreto izay nahafaty ity teratany vahiny fa tamin’ ny fisavana ny tranony dia nahitana zava-mahadome-lina teo ambony latabatra.
Maty tao an-dava-drano > Zazalahy 15 taona no maty latsaka tao anaty lava-drano ny zoma lasa teo tany Ambatoaranana any amin’ny distrikan’Ambato-lampy. Voalazan’ny zanda-rimaria fa nifoha tamin’ny 2 ora sy sasany hahandro sakafo ity tovolahy ity tamin’ io andro io, ka nandeha nan- tsaka rano. Ny nahatonga azy tao anaty lava-drano no tsy mbola voafaritra hatreto.
Fiara nivoaka ny lalana > Fiara marika Renault 25 no tafavoaka ny lalana ary avy eo nandona tamboho ny zoma lasa teo teny Ankadin-dambo-Ambohimangakely. Samy nahitana ratra avokoa ireo olona telo tao anatin’ilay fiara. Ny sabotsy tokony ho tamin’ny 8 ora alina tany Miadana Manjakatompo dia taksiborosy iray no nidona tamin’ny sisin’ny arabe. Olona telo no naratra ka nalefa notsaboina tao Ambatolampy.
Tapatapany FIARAHA-MITANTANA. Manomboka anio no tokony handihan’ireo mpikambana eo anivon’ny parlemantan’ ny tetezamita ilay volavolan- dalàna mahakasika ny fomba hitantanana ny tetezamita aorian’ny fialan’ny Filohan’ ny tetezamita Andry Rajoelina amin’ny toerany. Volavolan-dalàna izay manome fahefana tanteraka ireo minisitra eo anivon’ny governemanta hitantana ny raharaham-pirenena.
MIKONONKONONA > Amin’ity herinandro ity vao tena ho fantatra ny fizotr’ilay fampihaonan’nyFFKM an’i Zafy Albert, Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana ary Andry Rajoelina. Ny faran’ny herinandro teo no fantatra fa tafavory eto an-tanindrazana indray ireo Filoham-piangonana efatra mpitarika ny Ffkm.
Niakatra 2% ny vidin’ny vary ao Toamasina noho ny fiakaran’ny daram-pitate­rana araka ny fanamarihan’ny sampana manara-maso ny vary. Lasa Ar 1 400 ohatra ny kilaon’ny vary vokarina eto an-toe­rana raha Ar 1 350 teo aloha. Nahitana fidinany indray ny kilaon’ny vary eto an-toe­rana sy ny vary afarana ho an’ Antananarivo noho ny fihenan’ny mpividy.
Mihisatra ny tsenan’ny asa vaventy. Raha ny nambaran’ireo mpandraharaha eo amin’io sehatra io dia ny fanaovana mari-drafitra na mari-trano amin’izao fotoana izao no tena ilain’ireo olona manao trano ireo mpahay mari-trano ireny. An-kavitsiana ireo orinasa mahita tsena fanamboaran-trano. Tsikaritr’ireto farany ihany koa anefa fa ireo teratany vahiny manam­bady teratany malagasy no tena manorina trano. Trano manodidina ny Ar 80 tapitrisa eo no be mpanorina.
Sombiny TAPAKA NY FIARA-MIASA > Araka ny fan-tatra dia tsy vonona hiara-hiasa amin’ny Cenit amin’ny fanatontana ny biletà tokana intsony, ny Ceni ao Afrika Atsimo. Voalaza fa mbola hian-kina amin’izay fanapahan-kevitra horaisin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena amin’ny ho fanohizana na tsia ny fanampiana an’i Mada-gasikara amin’ny raharaham-pifidianana ny five-renan’ny fiaraha-miasa amin-dry zareo Afrika-nina tatsimo.
ISA MASINA > Kandidà fahafito hirotsaka amin’ ny fifidianana solombavambahoaka eny Atsi-mondrano i Solofonirina Lucie, izay nanatitra ny antontan-taratasiny, tetsy amin’ny Boriboritany fahatelo tetsy Tsaralalàna, omaly hariva. Ho an’ity kandidà ity dia ny fana-tanterahana ny fifidianana miainga eny ifotony no vahaolana ahafahana mamaha ny krizy politika eto Mada-gasikara.